बैरे 3948 days ago
serial 3948 days ago
chipledhunga 3948 days ago
Birkhe_Maila 3948 days ago
perfectionist 3948 days ago
rahulvai 3947 days ago
Birkhe_Maila 3943 days ago
perfectionist 3943 days ago
chipledhunga 3943 days ago
बैरे 3943 days ago
santosh1984 3943 days ago
serial 3942 days ago
Madness 3942 days ago
rahulvai 3942 days ago
बैरे 3942 days ago
Visitor is reading How student can makeaCredit history
Visitor is reading how to translate Nepali stamp into english ?
Visitor from US is reading Sajha Rap Battle
Visitor from DE is reading Female Basketball Players
Visitor is reading 30 Hot n Sexy Finalist of Miss Nepal USA 2011
[VIEWED 18398 TIMES]
Posted on 12-03-09 11:16 AM Reply [Subscribe]
लौ सुरुवात त खतरा छ ठुल्दाइ मोडेर कता लाने हो केही भन्न सकिन्न अहीले ।
Posted on 12-03-09 11:21 AM Reply [Subscribe]
निक्कै रोचक होला जस्तो छ ठुल्दाइ -
विश्वाश गरु कि नगरु हुने के - एस्तो कुरा हरु
ल ठुल्दाइ छिटो अर्को भाग पनि थपूँ
Posted on 12-03-09 11:30 AM Reply [Subscribe]
रोचक शुरुवात छ ठुल्दाइ, अर्को भागको प्रतीक्षामा।
Posted on 12-03-09 12:20 PM Reply [Subscribe]
धेरै पछि ठूल्दाईको लेखन पढ्न पाईयो।छेत्रपाटिकै एकजना द्यो माँकहाँ म पनि पुगेको थिएँ आमासंग। छेत्रपाटी चोकबाट थँहिटीतिर जाँदा देब्रेपट्टि हो ठूल्दाई?
Posted on 12-03-09 2:21 PM Reply [Subscribe]
लौ बर्बाद, अस्ती देखी यो कथा सुन्छु भनेर बसिरा बल्ल लेख्न थालनु भो ठुल्दाइ, ल जौँ जौँ दाई, सुन्दै छु, साची केइ होला जस्तो छ, दाईको कथा इन्तेरेस्तिङ हुन्छ! बसेँ है पलेटी कसेर कथा सुन्न
Posted on 12-04-09 10:57 AM Reply [Subscribe]
सुरु पनि अन्त्य पनि त्यही हो । द्यो माँहरुको मा देखेको भोगेको किस्सालाई लिपिबद्ध गर्ने जमर्को मात्र हो।
विश्वाश को कुरा हो ब्यक्ती पिच्छे फरक हुन सक्छ, मैले आँफैले देखेको, भोगेको भएकोले मलाई शंका छैन।
अर्को भाग अर्को हफ्ता ।
मलाई माथि उल्लेख गरेको द्यो माँ क्षेत्रपाटी ढल्को तिर हो, ठंहिटी तिर को होइन।
केही होइन धेरै कुरा भाको थियो । दैबी शक्ती भाका द्यो माँहरु थोरै छन तर तिनको कुरा अचूक छन । '
Posted on 12-08-09 10:05 AM Reply [Subscribe]
त्यो दु:खद घट्नाको बारे मा द्यो माँ लाई कसरी थाहा भयो, कसरी द्यो माँले आज भोली नै भेटिन्छ भन्नु भयो भन्ने यक्ष प्रशनहरुले मेरो माथिंगल घुमिरह्यो। स्कूलमा बिज्ञानका सर ले संसार बिज्ञानको आधारमा चलेको छ भनेर ज्ञान दिनु हुन्थ्यो। दैबी चमत्कार, भूतप्रेत सबै भ्रम हो भन्नु हुन्थ्यो। म दुबिधा मा परें, महर्जन सर को विश्वास गरुं या आफ्नै आँखा कान लाई। ( २०३४ -३५ साल तिर एस् एल सी दिने दाजु दिदिहरुलाई यो घट्ना बारे अबश्य थाहा हुन्छ होला नै । )
यस घट्ना पछी मलाई द्यो माँ प्रती आस्था र विश्वाश जाग्न थाल्यो । आमा त त्यसै धार्मिक तथा पुरातन बिचारका हुनुहुन्थ्यो नै । जे गरे नि, जे भए नि फलाना देउताको दोष लाग्छ भनी सतर्क गराउनु हुन्थ्यो। पेट दुखे, चामल ढोगाएर छानामा राखिदिनु हुन्थ्यो । विश्वाश को कुरा हो, आफुलाई विश्वाश न लागे नि आमा को आस्था माथि कहिलेइ प्रश्न गरिन । मलाई लाग्छ, कसैको प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्दैन भने कुनै पनि आस्था भक्ती ले भलो नगरे पनि कु-भलो गर्दैन ।
यही मूल मन्त्रले गर्दा म पनि आमा सँग द्यो माँ को जाने गर्न थालें । आमा लाई लाग्दो होला द्यो माँ को मा गएर हाम्रो दु:खका रात छोटो हुँदै गै रहेको छ । एउटा नेपाली धूप ( नेपाली कागजले बनेको)मा फुकिदिनु हुन्थ्यो । अनी मलाई ४-५ गेडा चामल फुकेर कागजमा पोको पारेन दिनु हुन्थ्यो र भन्नु हुन्थ्यो - जहाँ गए नि यो साथ लिएर हिंड्नु, जीत हुन्छ ।
घरमा धूप बालिन्थ्यो। धूपको वास्ना ले कतै नोक्सानी गर्दैन, सुबास नै फैलिन्थ्यो। दु:खको रात छोटिदै गएको महसूस हुन थाल्यो नै । दाई र म मिलेर तयार पारेको ज्वेलरीहरु किन्ने र कामको अर्डर दिने साहुजी भेटिसकेको थियो । भोकै बिताएका दिनहरु, अनिदो काटेका रातहरु बिगत भैसकेका थिए। समय सधैं एकनास रहन्न, प्रक्रिती को नियम नै हो । बुवाको स्वास्थ मा पनि उल्लेख्य सुधार भैसकेको थियो । समग्रमा भन्नु पर्दा जीवन सामान्य हुन हुन खोजिराखेको थियो। तै पनि स्कूले राहुले ले काम गरेरै खानु पर्ने बाध्यता थियो नै।
यी सबै परिवर्तनमा द्यो माँको कृपा देख्नु हुन्थ्यो माँ । स्वाभाबिक थियो नै। म भने समयको खेल सम्झन्थें । द्यो माँ को चामलको पोकाले कहिलेइ घाटा चाँही गरेन। म मा एक किसिमको आत्म विश्वाश बढेको थियो । गर्न सक्छु र गर्नु पर्छ भन्ने सकरात्मक् सोचको बिकास भएको थियो। यस मानेमा पनि द्यो माँ प्रती म क्रितज्ञ नै थिएं ।
बुवा लगभग ठीक हुनु भयो। सामान्य हिडडुल गर्ने सक्ने हुनु भयो । आर्थिक अवस्था सुध्रेर अब केही संचय गर्न सक्ने अवस्थामा पुगी सकेको थियो । चाडपर्ब फेरी हर्ष कै पर्ब हुन थालेको थियो ।
अचानक फेरी एउटा अनौठो घट्ना घट्यो । एक साँझ बुवाले रायोको साग किनेर ल्याउनु भयो । दिदीले भन्सा सम्हाल्नु भएको थियो। साग पकाउदा पकाउदै हरियो साग खैरो कालो हुन गएछ । दिदी ले अचम्म मानेर आमालाई बोलाउनु भएछ। आमा पनि तीन छक्क । न पाकेको साग पुरै खैरो कालो ।
" के हालिस यस मा " आमा को स्वाभाबिक प्रश्न थियो ।
"नून र बेसार मात्र हो " दिदी को सामान्य जवाफ।
" पक्कै पनि बेसार या नून को खराबी हुनु पर्छ, खाएर हेर कस्तो छ स्वाद ।"
तिख्खर तीतो भन्दै दिदीले मुखाक्रिती बिगार्नु भयो ।
राहुले, छिटो गएर ध्याको बनियाकोमा गएर बेसार र चिकं माइलाकोमा गएर नून किनेर ल्याउ । अन्तको हुँदैन फेरी ।
( अहिले सम्म पनि कष्ठमण्डप को अगाडि को ध्याको बनिया को पसलका मरमसालाहरु मा जन विश्वाश छदै छ । )
साग फालेर आलु पकाउन थालियो । नयाँ नून र बेसार सहित् । पकाउदा पकाउदै आलु पनि कालो भएर गयो ।
जीरा फेर्न बिर्सेंको थियो , जीरा पनि नयाँ किनेर हालियो । तै पनि कालो को कालै । त्यो बेलुकी अनेक शंकाहरु सँग मुछेर, नमिठो भात खाइयो ।
अर्को दिन बिहानै सबै भाडा कुडा सरसफाइ गरेर चुलोमा आगो बल्यो । नयाँ दाल, ताजा तरकारी अनी नयाँ भाँडा। पाक्नै लाग्दा पुन: खैरो कालो भएरै गयो । अब भने अनिष्ठ को शंकाले डंका बजाइ छाड्यो।
Posted on 12-08-09 10:17 AM Reply [Subscribe]
"""मलाई लाग्छ, कसैको प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष हानी नोक्सानी गर्दैन भने कुनै पनि आस्था भक्ती ले भलो नगरे पनि कु-भलो गर्दैन ""
लाख रुपियाँको कुरा!!
यो जे पकाए पनि कालो खैरो भएको कुरा आजै लेखे होला ठुल्दाई, उत्सुकता जाग्यो।
फलामे ताप्केमा पकाएको त हैन कतै? कि चमत्कारै हो?
Posted on 12-08-09 10:19 AM Reply [Subscribe]
Posted on 12-08-09 10:24 AM Reply [Subscribe]
<<<यो जे पकाए पनि कालो खैरो भएको कुरा आजै लेखे होला ठुल्दाई, उत्सुकता जाग्यो।
फलामे ताप्केमा पकाएको त हैन कतै? कि चमत्कारै हो?>>>
बाजेले सहि कुरो गर्नु भो, मैले नि तेइ भन्न ला थेँ, मेरी मुह कि बाट छिन् लि भन्छन नि, तेस्तै। फलामको भाँडो पो पर्‍यो कि, मेटाल्लिक अब्जेक्त पो छोएर हो कि। हुन त अब कुनै चमत्कार नै हुने होला, कसैको आँखा पो लाग्या हो कि, ल न दाई, आजै राखुम है, जिमालबाको पनि रीक्वेस्त, मेरो पनि आग्रह. आजै राखुम है।
Posted on 12-08-09 11:00 AM Reply [Subscribe]
ओहो कस्तो अचम्म भएको त। सार्है कौतुहुलता बढ्यो। अरु छिट्टै पढ्न पाउने आशामा।
Posted on 12-08-09 11:51 AM Reply [Subscribe]
ठुल्दाइ कहा आएर रोक्या भन्या अब रात भरी निद्रा नलाग्ने भयो , पुरे लाई सुन्तली को पिर ले निद्रा नलाग्ने बैरे लाई ठुल्दाइ को कथा ले ? मखुला पुरे ??
Posted on 12-08-09 2:06 PM Reply [Subscribe]
फलामए ताप्के ना पकाको कि चमत्कार हो अर्को अंक मा थाहा हुने छ । भोली सम्म पर्खनु पर्ला कि ??
जिम्माल बा लाई भलो भनी हालें , नत्र पर्सी लेख्ने बिचार थियो ।
अचम्म भाकै हो । न भाको लेख्दिन ।
मज्जा ले सुते हुन्छ,बाकी भाग पढे पछी झनै निद्रा न लाग्ने हुन सक्छ । साबधान ।
Posted on 12-09-09 12:53 AM Reply [Subscribe]
La Rahulvai (umer maa ta dai nai bhannu parla) katha dherai nai rochak chha!!!! Arko bhaag ko pratikshyamaa.....
Posted on 12-09-09 9:25 AM Reply [Subscribe]
ल त ठुल्दाइ - एक्दम इन्टेरेस्टिङ भइराछ
अर्को भाग तुरुन्त पेश गर्नु होला
कृपया कथाको अर्को भाग टाँसि सबैको कौतुहलता मेटाइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।
अखिल साझा ठूल्दाई पाठक मञ्च
Posted on 12-09-09 10:48 AM Reply [Subscribe]
त्यस बिहानको दाल तरकारी पनि अपत्यारिलो ढंगले खैरो र तर्रो भए पछी माँ लाई शंका मात्र होइन यकिन भैसकेको थियो - यो कुनै दुष्ट आत्मको दुष्ट्याइ हो भनेर । टिप्पणी कर्ता मित्रहरुले भने जस्तै फलामे कराइ को कमाल हो कि भनेर पनि हेर्यौं । हैन रहेछ, प्रेशर कुकुर को दाल समेत कालो खैरो।
त्यही दिन साँझ म र माँ द्योमाँ को शरण मा पुग्यौं । सधैं बिहान बिहान आउने आमा देखेर द्यो माँ पनि चकित हुनु भयो । साँझ भाकोले द्यो माँ कोमा कोइ थिएन । माँले घरमा देखिएको अचम्मको घट्नाको बिस्तार लगाउनु भयो।
आँखा चिम्लेर आसनमा बिराजमान द्योमाँले भन्दै जानु भयो -
"दुष्टको आँखा लागेको हो । केही दिन अगाडि परिचित् तर आवतजावत नभेको बुढी एक जना घरमा आएको हुनु पर्छ । त्यो बुढी आइमाइ बसेको कोठामा, बसेको ठाउंको मुनितिर एकमुठी चामल छोडेर गएको हुनु पर्छ। एक गेडा पनि न छुटिने गरी टिप्नु र बिष्णुमती मा लगेर फाल्नु। फेरी पुरानै स्वाद र रंगको खाना पाक्छ । "
यती भन्दै द्योमाँले धूप फुकेर दिनु भयो । माँले केही रुपैया चाढाइ द्यो माँलाई ढोग गरी त्यो दुष्टबाट मुक्ती दिलाई दिनुस् भनेर आग्रह गर्नु भयो।
"केही बिगार गर्न भ्याएको छैन त्यसले, अहिले नै गएर फ्याकी दिनु , सब ठीक हुन्छ ।"
हस त भन्दै हामी फर्कियौं ।
फर्किने क्रममा मैले माँलाई सोधें , को आएको थियो हाम्रो घरमा ? किन आएको ? त्यसको हामीले के बिगारएका छौं ?
को भन्दा नि अहिले त्यो चामल फ्याक्नु जरुरी थियो र आमाले भन्नु भयो - "यो सबै पछी भनौला अहिले छिटो घर पुग्नुछ। छिटो हिड ।"
मैले पनि कर गर्न मनाशिव मानिन। बाटोमा रिक्सा भेटियो, ३ रुपैयामा राजी भयो । त्यती बेला हाम्रो हैसियत रिक्सा चढ्न सक्ने भैसकेको थियो । ५-७ मिनेट को बाटोभरी म सोच्दै गएं ।
बिरामी बुवा, दुई छाक भात को जोगार गर्न धौ धौ को अवस्थामा बाट भर्खर पार लागेको । हाम्रो शत्रु को हुन सक्ला? हामीले कसैको बिगार गरेका छैनौ। कसैको सम्पत्ति पचाएका थिएनौ। उल्टो बुवाले अंश नै लिन्न भनेर घर छोडेर आउनु भएको । दुखियारी को घरमा दु:ख दिन कसलाई रहर जागेको होला । आदी इत्यादी ।
घर पुग्ने बित्तिकै माँ मेरै कोठामा लाग्नु भयो । यही बसेकी थिइ , त्यो बोक्सी भनी चकटी झिकेर हेर्नु भयो । केही थिएन ।
चकटी मुनी सतरंजा ( अहिले भाषामा कार्पेट जस्तो सुकुलमाथि ओछ्याउने ), त्यस मुनी सुकुल थियो । माँले सतरंजा उठाइ हेर्नु भयो। सुकुलको चाउरे अनुहारले जिस्काए जस्तो लाग्यो । केही थिएन। सुकुल मुनी लिपेको भुइं । म भएको भए हैन राइछ द्यो माँ को शंका भनेर हिड्थें होला। आमा को मन मानेन ।
सुकुल पनि हटाएर हेर्नु भयो र हेरेको हेरै हुनु भयो।
रातो रंगको ताइचिन चामल एक मुठी भेटियो । मानौ सुनियोजित ढंगले आतंकारीहरुले रोड साइड बम्ब लुकाइ राखेको छ त्यहाँ ।
एक टुक्रा कागजमा बडो जतनका साथ एक एक गेडा टिप्नु भयो र मलाई दिनु भयो ।
"जा गएर बिष्णुमती मा फालेर आइजा । बाटोमा कसैसित नबोल्नु र फर्केर नहेर्नु ।"
म एक आज्ञाकारी बालक, सरासर बिष्णुमती नदी मा गए र फालेर आएं । फर्किने बेला मा मरुहिटी मा हात मुख धोएर आइजा भनेको ले हातमुख धोइ फर्कें ।
भान्सा तयार भयो, फेरी अचम्म भयो । तही नून, तेल, बेसार मा पाकेको साग हरियो नै रह्यो। स्वाद पनि प्राकृतिक ।
त्यो दिन मैले सोधिन त्यो चामल राख्न आउने बुढी को हो भनेर ।
राती अबेर सम्म निद्रा लागेन, उक्त दुष्ट को मनसाय र आसय के थियो होला, हामीलाई बिगार गरेर के पायो होला तिनले ? सोच्दा सोच्दै कती बेला निद्रा लाग्यो थाहा भएन ।
Posted on 12-09-09 11:00 AM Reply [Subscribe]
ल ठुल्दाइ - के भनु के लेखु भो -
पत्याउन नि गाह्रो, नपत्याएर कसरी बस्ने जस्तो कुरा -
आफुले पनि देखेको सुनेको नै हो एस्तो कुरा हरु -
ल दाई लेख्दै जाम हामी पढ्दै गरम्ला
Posted on 12-09-09 11:48 AM Reply [Subscribe]
ठुल्दाइ यो अन्न्याए भयो क्या को आको थियो घर मा ? द्यो मा ले कसरी थाहा पाउनु भयो हरे के भनु खै ?? बौचा ले भने झै पत्त्याउन नी गाह्रो नपत्याएर कसरी बस्ने जस्तो कुरा । आफु नी हुर्क्या काठमाडौं गणेश थान तिरै हो यस्तो कुरा हरु सुन्या त टन्नै हो । एकदम चुक चुक भयो ल दाई अरको भाग चाडो हालु